Isefu yentsimbi esisangqa intsimbi, intsimbi wocingo kwalenza - Bangyi
I-Binzhou Bangyi Metal Products Co, Ltd. yasekwa ngo-2010 eBinzhou, idolophu yesango lezorhwebo laseShandong. Umzi-mveliso ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-10,000. Inkampani inendawo ephezulu ngokwendawo, kufutshane neQingdao Port. I-Binzhou Bangyi Metal Products Co, Ltd.kuyinto eyodwa yokumisa imveliso yokudibanisa imveliso, iR & D, ukuthengisa kunye nenkonzo.
Inkampani iya kubambelela kwifilosofi yeshishini kunye nenjongo yokunyaniseka kunye nokuqinisekiswa komgangatho, kwaye ithathe ifilosofi yolawulo lokugxininisa kulawulo lwabantu kunye namava abathengi, ngokuthe chu ukwenza ishishini, kunye nokuthatha indlela yophuhliso oluzinzileyo njengesikhokelo, kunye nokukhuthaza iinkampani ezininzi ukuba zisebenzise iimveliso zethu.
China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, PVC Camera Isefu Steel Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi, Camera Camera Intambo,